Lamaane Irisha oo u Ololaynaya Korinta Caruur Ethiopian ah – Rasaasa News
Lamaane Irisha oo u Ololaynaya Korinta Caruur Ethiopian ah
Nov 19, 2011 Lamaane Irish oo u Ololaynay in la Korinta Caruur Ethiopian
Dublin, November 19, 2011 [ras] – Qoysas ay tiradoodu tahay 300 oo Irish ah oo doonaya in ay koriyaan caruurta Ethiopia ayuu sharciga ka dalka Irishku ka hortaagan yahay, waxayna qoysasku u ololaynayaan in sharciga wax laga badalo.
Finian McGrath oo ah xisbiga madaxbanaanida, kana tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Irland, ayaa sheegtay in lamaanaha hada korsada ilmaha Ethiopian-ka ah in ayna haysan fursad ay ugu helaan ilmahan walaal Ethiopian ah, hadii aan la qaadi talaabo.
Aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Irland ayaa ku guul daraystay in uu galo heshiis korinta caruurta ah oo dhex mara labada dal ee Ethiopia iyo Irland.
Dadka Irishka ee caruur korinta ka doonaya Ruushka iyo Ethiopia, ayaan heli karin maadaama ayna ku jirin xubnaha dalalka galay heshiiskii korinta caruurta [Hague Convention on Intercountry Adoption].
Way ku adag tahay lamaanahan in ay ilmahood u helaan walal inta uusan iman heshiis kan Hague la mid ah. Wasiirka caruurta Frances Fitzgerald iyo dad badan oo doonaya caruur ay koriyaan, ayaa wada sidii uu u dhici lahaa heshiis u dhaxeeya Ethiopia iyo Irland. Wasiirku wuxuu sheegay in ay soo baxayaan arimo adag oo u baahan in la xaliyo inta aan la gaadhin heshiis u dhaxeeya labada dal.
“Sharciga iyo sharciyeynta laga isticmaalo Irland ee xidhiidhka u dhaxeeya korinta iyo ilmaha la korinayo mar mar way ku kala duwanaan karaan dalalku,” ayuu yidhi McGrath.
Waxaa jira 300 oo qoys oo doonaya in ay koriyaan caruur ka timaada Ethiopia, wuxuuna u sheegay qoysaska in ayna ka rajo dhigin korinta caruurta Ethiopia.
“Waxaa jira 5,000,000 oo caruur waalid la,aan ku ah Ethiopia, tirada dadka Ethiopia-na waa 80,000. 3,031caruur ah kaliya ayey koriyaan dalalka uu u dhaxeeyo heshiiska caruur korintu,” ayuu yidhi Mr. McGrath.
Mr.McGrath, wuxuu ka codsaday guurtida aqalka hoose Irland in xidhiidh dheeraad ah uu dhexmaro Ethiopia iyo Irland. Waxaana hada jooga Ethiopia wafti ka kooban xisbiyada oo dhan iyo hayada kaalmada ugu badan siisa Ethiopia.
Dalalka Maraykanka iyo Sweden way galeen heshiiskii Hague, waxayna wadaan korinta caruurta Ethiopia. Dawladahani waxay ka wadaan shaqooyin ay ku xalinayaan dhibaatada adag ee bad baado la,aanta caruurta Ethiopia. Mr.McGrath ayaa yidhi “saaxiibada dawladiisa iyo waaxyahoodu waxay ka shaqayn si ay u xaliyaan mushkiladaha jira.”
Xigasho: Irish times
Ethiopia oo ku Dhawaaqday Qorshe ay Dib u Dajin Ugu Samaynayso 132,000 oo Qoys Mudo ka Yar Sanad
Ethiopia joins fight against Al Shabaab